Shiinaha Logo Custom Logo Daabac Soosaarayaasha Shirt Gaaban ee Qalalan iyo alaableyda | RE-HUO
Nooca alaabta: Polo
Midabka: Madow / caddaan / boqortooyo / buluug / buluug / casaan / jaalle / liin / balli buluug / cagaar ah
Midabada keydka, MOQ waa 100 gogo ' Polo midab kasta, waxaadna dooran kartaa cabirro badan.
Kani waa jaantuska cabbirka ee keydka, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo cabbirka la habeeyay, waxaad noo soo diri kartaa jaantuskaaga cabbirka ama waxaad noogu soo diri kartaa shaati, naqshadeeyeheenna ayaa u qaabeyn doona sida aad u baahan tahay.
Waxaad dooran kartaa mid ama in ka badan habab daabacaad si aad u sameysid taada polo mooddo badan
Waxaad noo soo dirtaa nashqadahaaga waxaanuna u daabici doonaa si waafaqsan dalabkaaga, hadaadan aqoon sida loo sameeyo a polo naqshadeynta, waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama fikraddaada, oo naqshadeeyeheenna ayaa kuu dhameystiri kara naqshadda adiga.
Waxaan bixinaa adeeg sumad iyo adeeg tag ah, sameynta polo leh sumaddaada.
Hore: Shaati gacmo dhaadheer oo tayo sare leh oo jumlo ah Midab saafi ah 100% funaanado cudbi ah
Xiga: Shaatiyada polyester qalalan oo jumlo ah oo loogu talagalay xayaysiinta marathon-ka iyo ololaha doorashada ee loo habeeyay taangiga sublimation sare